KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 04/03/2012
Thursday, 8 March 2012--
မတ်လ ၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
အကြမ်းဖက်ခံနေရသည့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဖြစ်ထွန်းစေရန် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအ ရုံး (KWO)က ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု KWO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နန်းဒါး အယ်ကလယ်က ပြောသည်။
Author: ကိုးဒီသွေး | Posted at: 9:41 PM | Filed Under: article
ဗကပပြိုကွဲအပြီးမှာ လူမျိုးစုလိုက်ပြီး ဗကပလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကြီး ၄ ပိုင်း ကွဲထွက်သွားတယ်။ ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ ဦးပေါက်ယိုချန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ UWSA ဝသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့၊ ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကျားရှင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ MNDA မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးစုများ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့၊ ဦးစိုင်းလင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ NDAA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ဦးဇခုန်တိန်ယိန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ NDAK ဒီမိုကရေစီသစ်တပ်မတော် (ကချင်) စတဲ့ အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။
၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး တနှစ်အကြာမှာ လက်နက်အင်အား စစ်ရေးအတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ ဗကပတပ်ကြီး ပြိုကွဲသွားတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာလည်း မာနယ်ပလောမှာ ကေအန်ယူက အားကောင်းနေချိန်ဖြစ်တယ်။ မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်တွေ အားကောင်းနေချိန်ဖြစ်တယ်။ ဗကပခွဲထွက် လက်နက်ကုိုင်တွေနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်လက်နက်ကိုင်တွေ ပေါင်းသွားရင်ဆိုတဲ့ အတွေးဟာ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းကို ငယ်ထိပ်သွေးတက်သွားစေတယ်။
ဒီမှာတင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့ လော်စစ်ဟန် လော်စစ်မင်း အောလစ်ယန်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးတုို့ကို ကြားပွဲစားလုပ် တက်သုတ်ရိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း တခြားလက်နက်ကိုင်မျိုးစုံနဲ့ပါ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဦးလင်းဆိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ မတ်ကျန်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တဲ့၊ ဦးလီချန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ နားရိုင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ဘဝသစ်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့တဲ့၊ မုံးဟ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တဲ့၊ ဦးလောမား ခေါင်းဆောင်တဲ့ မုံးပေါ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တဲ့ စုံလို့ပါပဲ။ ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံး တချိန်က ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာရဲ့အဖွဲ့က ခွဲထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေပါ၊ နားရိုင်းဒေသဆိုတာ ရှမ်ပြည်တောင်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့နယ်ထဲက ရွာလေးပါ။ အဲဒီင်္မှာ ဦးလီချန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ခွန်ဆာအဖွဲ့က ဒေသစ်ထူထောင်ပါတယ်။ မတ်ကျန်းတို့ မုံးပေါ်တို့ မုံးဟတို့လည်း ဒီသဘောပါပါပဲ။
နှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ကို ဖန်တီးခဲ့သူက လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကို ဒုတိယအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လုပ်၊ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ထောက်ခံခိုင်း၊ ပါတီဖွဲ့ လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ခုိုင်းလာပြန်တယ်။ သမုိုင်းတပတ် ကျော့လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ထူးခြားချက်က ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးဆက် နှစ်ခုလုံးကို စစ်တပ်က ကြိုးကိုင်ခဲ့တာ ကြိုးကိုင်နေတာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းပြမြေပုံလိုတယ်လုို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မတ်လ ၁ ရက် သူ့မိန့်ခွန်းမှာ ပြောတယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာကို အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်လို့ ဦးသိန်းစိန်က ပြောတယ်။ ဒီလို အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တာကို ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံလို့ သုံးနှုန်းတာဖြစ်တယ်။
ဆရာမောင်စူးစမ်း အယူအဆအရဆိုရင် လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးက တကဏ္ဍဆိုပြီး လုပ်တာမျိုး၊ ဂိုဏ်းဂဏနိုင်ငံရေးမျိုး အခုချိန်မှာ မရတော့ဘူး။ အခုက Paradigm shift ဖြစ်သွားတာ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးမှာ ရွေးကောက်ပွဲကို တန်ဖိုးထားရမယ်။ Election politic ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ လွှတ်တော်နဲ့ လုပ်တာ။ အခု လွှတ်တော်က ပင်မရေစီးပဲ။ ဒီပင်မရေစီးကြောင်းထဲ ၀င်ပြီး ဆွေးနွေးရမယ်လို့ ဆိုတယ်။
ပင်မရေစီးကိုက ဖြောင့်ဖြောင့်မစီးနိုင်ဘဲ အမှိုက်သရုိုက်တွေ အညစ်အကြေးတွေ များနေတာမို့ ပါရာဒိုင်း အပြောင်းအလဲဟုတ်ရဲ့လား ဆိုတာ အရင် ကြည့်ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးလုို့ဆိုရာမှာ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ အရ ကမ္ဘာမှာမရှိတဲ့ စည်းကမ်းပြည်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီကုိုသာ ဦးတည်ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မောင်စူးစမ်းအယူအဆနဲ့ မတူတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဘေးထွက်ဆုိုးကျိုးတွေ အများကြီး မျှော်လင့်ထားရမှာ ဖြစ်တယ်။
စစ်အစိုးရတလျှောက်လုံး ဘယ်လိုဒီမိုကရေစီသွားမလဲ ဆိုတာကိုတောင် ၀ိဝါဒအမျိုးမျိုး ကွဲခဲ့တယ်။
၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ Functioning ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားမယ်လို့ နအဖက ပြောတယ်။ တချိန်က နအဖပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပြုတ်သွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးကြီးလှမင်းကတော့ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကစီသွားရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ၂ဝဝ၄ ခု နအဖရဲ့ Road Map မှာတော့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သွားမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီ့နောက် ပြုတ်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က လောကပါတရားသုံးပါး အခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို သွားမယ်လို့ ပြင်ဆင်ပြောပြန်တယ်။ နအဖခေတ် သတင်းစာတွေမတော့ ခေတ်သစ်ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး ပြောင်းလဲရေးသားပြန်တယ်။ အတော် ရီစရာကောင်းတယ်။ နောက်ပိုင်း အဲသလို ပေါက်ကရ ဒီမိုကရေစီကြောင်းပြောသူ ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်တွေကို စစ်တပ်ကပဲ ထောင်ချလိုက်တယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ ... တဲ့
မှန်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုန်းကမှ မရုိုးသားခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်လူထွက်အစိုးရ လုပ်ပုံတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်သလား၊ ယာယီ တပွဲတိုးလုပ်ပြီး လက်နက်ကိုင်တွေကို လှည့်ဖျားဖို့လားဆိုတာလည်း ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မတ်လ ၁ ရက် မိန့်ခွန်းပါ အပြောအရ အစိုးရ ကမကထပြုတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံမှာ အဆင့် ၃ ဆင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အောက်ပါ ပုံကိုကြည့်ရင် ဘယ်အဆင့်တွေမှာ ဘာကိုရည်မှန်းသလဲ ရှင်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။
ပြည်နယ်အဆင့်မှာ နှစ်ဘက်ရန်လိုမှုတွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်စဲဖို့၊ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းသဘောတူထားတဲ့ နယ်မြေဒေသများမှာပဲ နေထိုင်ကြဖို့၊ ယင်းသတ်မှတ်နေရာမှအပ ကျန်နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်ရာတွင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ သွားလာဖို့၊ နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း သဘောတူထားသည့် နေရာများမှာ ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်ထားရှိဖို့၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေရာ၊ အချိန်၊ နေ့ရက်တွေ ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတိုင်းက အလွယ်တကူ သဘောတူဖို့ များပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ ကျော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တုန်းကလည်း ဒီနည်းပဲ သုံးခဲ့တာပါ။
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ပရိယာယ်အများဆုံး လှည့်ကွက်အများဆုံး ပါဝင်တာမို့ မာယာထောင်ချောက်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ အထူးသတိထားရမယ့် အချက်ဖြစ်တယ်။ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပါ အချက်တွေသာ လက်ခံရင် ဒီအဆင့်ကို တက်လှမ်းလာတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှန်သမျှ လက်နက်စွန့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အစိုးရဘက်က လိုချင်တဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။
ဒီအဆင့်မှာ ဆွေးနွေးရမယ့် အချက်တွေကတော့ ပြည်ထောင်စုကနေ ဘယ်တော့မှ ခွဲမထွက်ဖို့၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လက်ခံဖို့ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ ဆေးဝါးများ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆုိုတဲ့ အချက်တွေမှာတော့ နှစ်ဘက်သဘောတူနုိုင်စရာ ရှိတယ်ပဲထား။ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က နောက်တဆင့်ကို သဘောတူဖို့ အတော်ခက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ ပြည်နယ်အဆင့် မူလအပစ်ရပ်ချိန်တုန်းက ကုိုင်ထားတဲ့လက်နက် မချရေးက လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေဘက်က အဓိက ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်လက်နကိုယ်ကိုင်ပြီး ကိုယ့်နယ်မြေနေရတယ်၊ စီးပွားလုပ်စရာလေးတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ ဟန်ကျသလိုလို တွက်နိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ရမယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ကျတော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကြား သဘောထားကွဲပြားမှုတွေ ကြုံရမှာ မုချဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ပြီဆိုရင် လက်နက်စွန့်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ လက်နက်စွန့်အောင် နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ခိုင်းတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါမှ လက်နက်စွန့်အဖွဲ့တွေကို အစိုးရက ကြိုက်သလို ကြိုးကိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြဌာန်းချက်တခုသာထားခဲ့ရင် လက်နက်စွန့်ခိုင်းရေး အစိုးရအကြံအစည် ရိပ်မိသွားမှာ စိုးတဲ့အတွက် ပြည်ထောင်စုကနေ ဘယ်တော့မှ ခွဲမထွက်ဖို့၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လက်ခံဖို့ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နှစ်ဘက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ ဆေးဝါးများ တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စတဲ့အချက်တွေနဲ့ အရင်ချည်တုပ်ဖို့ ကြိုးစားထားတာဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ပြီဆုိုတာနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ တချိန်က လက်မခံခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့ ကတိပေးရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကတိကြောင့် အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ခင် ကပျက်ယပျက် ပြောမိ ဝေဖန်မိရင်တောင် အခြခံဥပဒေဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ ဒုက္ခရောက်မှာ သေချာနေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကနေ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာ ကြုံရမယ့် ပြဿနာတွေလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
ပါတီဖွဲ့ပြီးရင် ရွေးကောက်ပွဲတခုခုအတွက် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် ၃ နေရာ မပြိုင်နိုင်ရင်လည်း ပါတီအဖျက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအဆင့်မှာတင် လက်နက်ကုိုင်အသွင်ပြောင်းပါတီ အတော်များများ ပြုတ်ထွက်သွားနုိုင်တယ်။
- ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအရ ပါတီဝင်ဦးရေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ထိန်းမထားနိုင်ရင်လည်း ပါတီအဖျက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
- အမတ်လောင်းတွေကိုလည်း အရည်အချင်းမပြည့်မီအောင် အစိုးရဘက်က ညစ်ကွက်မျိုးစုံနဲ့ ဖြုတ်ချနိုင်ပါတယ်။
- အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခုံရုံး စတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တချိန်က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လက်ကတုံးတောင်ဝှေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တခြားညစ်ကွက်မျိုးစုံနဲ့လည်း ထစ်ထားမှာဖြစ်တယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာပါတဲ့ နောက်လှည့်ကွက်က ...
“လွှတ်တော်တွင်းရောက်ရှိလာလျှင် အခြားသော တိုင်းရင်းသားများနှင့် အကြေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့” ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။
လွှတ်တော်ထဲရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အသွင်ပြောင်းပါတီတွေဟာ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို စိတ်ကူးယဉ်မယ်ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်တွေနဲ့ ချည်တုပ်ပြီး မလှုပ်နိုင်အောင် ကိုင်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ် (အသေးစိတ်ကုို ဟန်တင်အောင်ရဲ့ ဘာပြင်မှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ)။
သေချာတာက လက်နက်ကိုင်အသွင်ပြောင်း ပါတီတွေဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြံ့ဖွံပါတီနဲ့ မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ပါ ထိပ်တိုက်ဖြစ်မယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို မြန်မြန် လွှတ်တော်သတ်ကွင်းထဲကို အစိုးရက ကျုံးသွင်းပေးနေသလားလို့ တွက်စရာရှိပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အသွင်ပြောင်းပါတီတချို့ လက်နက်ပြန်ကိုင်သွားနိုင်မယ့် အလားအလာရှိတာမို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် လမ်းပြမြေပုံမှာ ပြောထားသလို “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ တခုတည်းသော လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်အဖြစ် ရပ်တည်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့” ဆုိုတာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အလားအလာမရှိတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ အကောင်အထည်ဖော်မယ့်ကာလကို ၃ နှစ် အနည်းဆုံး ကြာမယ်လို့ ကြံ့ဖွံ့အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်း ပြောတဲ့အချက်ရယ်၊ ဧပြီ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း ကျန်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တမ်းမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ့်အလားအလာ နည်းတာရယ် ထည့်တွက်မယ်ဆုိုရင် လက်နက်ကိုင်အသွင်ပြောင်းပါတီတွေဟာ အစောဆုံး ဒုတိယ ၅ နှစ်သက်တမ်း အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျမှာသာ ၀င်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါ ကြားကာလမှာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဟာကွက်ပျော့ကွက်ကို လေ့လာဖို့အတွက် ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့ လှန်ထားမှာဖြစ်တယ်။
ဒုတိယ ၅ နှစ်သက်တမ်းကိုလည်း ကြံ့ဖွံပါတီကပဲ ညစ်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆက်ပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် လက်နက်ကိုင်အသွင်ပြောင်းပါတီတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာမှပြောခွင့်မရဘဲ အိပ်ငိုက်ရင်း မူလမျှော်မှန်းတဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်တယ်။
စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွံပါတီကလည်း လူထုအပေါ်သြဇာကြီးမားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို နောက် ၅ နှစ်သက်တမ်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်ခွင့်ပေးပါ့မလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ ဒုတိယ ၅ နှစ်သက်တမ်းမှာ အန်အယ်လ်ဒီက အများစုအနိုင်ရဖို့ဆိုတာ ရေရေရာရာ မရှိသေးတဲ့တိုင်အောင် လက်နက်ကိုင်အသွင်ပြောင်းပါတီတွေ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့သာ မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး အတိုက်အခံကောင်းကောင်း ပေါ်လာရေး စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ ဒုတိယဆင့်ခေါ် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာတင် အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား ပဋိပက္ခတွေ အငြင်းပွားမှုတွေ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ခြေဦးပြန်လှည့်မယ့်အဖွဲ့တွေလည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။
ချုပ်ကြည့်မယ်ဆုိုရင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ တတိယဆင့်ဖြစ်တဲ့ “နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ... စတဲ့ နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ အဓိကကျတဲ့ Political Player အားလုံး ပါဝင်တဲ့ ဤလွှတ်တော်ကြီးမှာ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးရေး” ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သာဖြစ်ပြီး လုံးဝအကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ဦးထွန်းလွင်က၂၀၀၈ ခုနှစ်နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်း မိုးလေဝသ ဟောပြော
မြ၀တီမြို့ အနောက်ဖက် ရွှေဟင်္သာဘုရားကုန်းရှေ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း တည်ထားကိုးကွယ်မည့် စွယ်တော်ဘုရားကုန်းအား (၂၉-၂-၂၀၁၂)ရက်နေ့ ညနေ (၃း၄၀)နာရီခန့်လောက်ကစ၍ တောမီးလောင်ကျွမ်းရာ ဓမ္မာရုံအတွင်းပါ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ စွယ်တော်ဘုရားကုန်းပေါ်တွင် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်လောက် စွယ်တော်တည်နေသော ပန်းရံလုပ်သားများ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ကြရာ သွေးထွတ်သံယိုမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုလည်း ဘုရား၏ ဓမ္မာရုံ မီးလောင်ခဲ့သည်။ နမိတ်မကောင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အညာဒေသမှ ရောက်ရှိလာသော ဆရာတော်တပါး၏ မိန့်ကြားချက်ကတော့ ယခုတည်ထားကိုးကွယ်မည့် စွယ်တော်ဘုရားသည် မြ၀တီမြို့၏ ဘုမ္မိအရပ်ဖြစ်နေကြောင်း၊ ဘုရားတည်ထားသည့် လူသည် ငါးပါးသီလမလုံခြုံကြောင်း၊ ယကြာချေရန်ရည်ရွယ်တည်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂါသားမှ အင်္ဂါဘုရားကို ဘုမ္မိအရပ်တွင် တည်ထားသည့်အတွက် ရာထူးအလုပ်ကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
မြို့နေလူထု၏ ပြောဆိုနေမှုများမှာလည်း ယခင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဇော်လွင်ဦး လည်း ဘုရားကိုအကြောင်းပြ စီးပွားရှာခဲ့မှုကြောင့် တစ်နှစ်ခန့်သာနေရာပြီး ပြောင်းပြေးရခဲ့သည်။ မြ၀တီမြို့တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ရန် ပေးသည့် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းနေလင်း ဆိုသူပင်လျှင် ရာထူးမှ ပြုတ်သွားခဲ့ရသည်။ မည်သည့်အစီအရင်နှင့် မည်သူကပေးသည်ဆိုသည့် သမိုင်းမသိရတဲ့အတွက် ရာထူးတွေ ထိခိုက်နေသည်ဟု ပြည်သူများက ပြောပါသည်။
စွယ်တော်ဘုရားတည်ရန် ရံပုံငွေအား မြ၀တီမြို့ ကုန်သည်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ သောင်းရင်းမြစ်ကမ်းပါးတစ်လျှောက် စက်သုံးဆီဆိုင်များ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ ရွှေမြန်မာမော်တော်ယာဉ်အသင်းများမှ အလှူငွေ မထည့်မနေရ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ရသည်။ ယခုလည်း သင်္ဃန်းညီနောင် ဂိတ်တွင် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံအဖွဲ့အား အမိန့်ပေးခံရ၍ ရံပုံငွေအား ရှာဖွေပေးနေလျှက်ရှိသည်။
နေ့ စဉ်သတင်း - မတ်လ ၅ ရက် ၂၀၁၂
James Garwood | 1978 - 2010 (ကြွေလွင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ကရင့်မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦး အမှတ်တရ)
The Road Film မှ ကရင့်မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦး ကောင်းကင်ဘုံ အနားတစ်စုံသို့ သွားနင့်လေပြီ။ သို့ ပေသော်လည်း သူ့ ကို ကျတော်တို့ မမေ့ပါ။ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ကျတော်တို့ သူ့ ကို အမြဲတမ်း သတိရနေမှာပါ။ ကောင်းရာသုဂတိလမ်းပါစေ Mr. James Garwood...... May God Bless the rest of your family.
Our hearts our broken after finding out one of our closest friends has passed away - James Garwood was one of the most amazing and unique people we have ever known, and he gave his life in trying to help the Karen people. The world isn't as good without you, but we are sure heaven just becamealot more interesting. Love you Brown Trout.
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့အကြား ပြုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသား ကွန်ဖရန့် ကို ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်မှာ ၄ ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကွန်ဖရန့် အပြီးမှတော့ အဲ့ဒီ ကွန်ဖရန့် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို မတ်လ ၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ ကလပ်မှာ ပြုလုပ်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့အကြား ပြုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသား ကွန်ဖရန့် ကို ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်မှာ ၄ ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကွန်ဖရန့် အပြီးမှတော့ အဲ့ဒီ ကွန်ဖရန့် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို မတ်လ ၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြို့မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ ကလပ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသား ကွန်ဖရန့် ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့ နမ့်ဇိုယာဖန်း၊ နော်ကညောဖော နဲ့ စောကဲနက်မိုး တို့ က နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းမှုတွေကို ဖြေကြားသွားခဲ့တယ် ဟု သိရှိရပါတယ်။
Karen Reunited Group (united in diversity)
Umpiem Mai Refugee Camp Fire - destruction- coordination,-relief efforts and rebuilding
ဗိုလ်မှူး စန်းအောင် DKBA
KNU Phan Award (2011)
စောထူးထူးအယ် အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နော်ဒီထက်မက စွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ။
Submitted by admin on Saturday,3March 20127 Comments
မတ်လ ၃ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းဖော့ဂေ (ကေအိုင်စီ)
၂၀၁၁ခုနှစ်အတွက် ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ Free Burma Ranger- FBR အဖွဲ့ဝင် စောထူးထူးအယ် အား မတ်လ ၁ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
KNU ခရိုင်(၅)ခုမှ အစိုးရတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကို FBR ထုတ်ပြန်
၇ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ခရိုင်(၅)ခုတွင် ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာ အစိုးရမှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုလျှက်ရှိကြောင်း ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်များအား အကူအညီပေးနေသည့် FBR က မတ်လ ၅ရက်နေ့၌ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့အကြား ဇန်န၀ါရီ ၁၂ရက်နေ့က ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူညီ လက်မှတ်ထိုးပြီး နောက် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်သည့် ဒူးပလာယာ၊ တောင်ငူ၊ ညောင်လေးပင်၊ ဘိတ်-ထားဝယ်နှင့် ဖားအံခရိုင်အတွင်း ရှိ ဒေသခံများ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများကို FBR က ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
FBR ၏ ဒါရိုက်တာ တာအုဝါးပါက “မြန်မာအစိုးရနဲ့ KNU အပစ်ရပ်ရေး ပဏာမ သဘောတူညီမှုကာလဖြစ်ပေမယ့် အထူးသ ဖြင့် တောင်ငူဒေသဘက်မှာ အစိုးရစစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ အရင်တုန်းကနဲ့ မခြားဘူးဆိုတာ ဒီ report (အစီရင်ခံစာ)က ပြနေပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်ဒေသအတွင်း မြန်မာအစိုးရတပ်၏ တပ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်း၊ ရိက္ခာပို့ခြင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေခြင်းများ ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေတွင် ရှိနေသေးသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
KNU နှင့် အစိုးရတို့ လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်း ကရင်ပြည်နယ်ရှိ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တောင်ငူခရိုင်၌ တပ်မ (၆၆) လက် အောက်ခံ တပ်ရင်းများက ဘူဆာခီးတပ်စခန်း၊ ဒူးပလာယာခရိုင်၌ အစိုးရတပ် ခမရ(၃၄၆)က မဲ့ကတီတပ်စခန်းနှင့် ညောင် လေးပင်ခရိုင်၌ ခမရ(၅၉၉)က မိုးပြနှင့် လေးဒေး စသည့် ၎င်းတို့အခြေစိုက်သည့် တပ်စခန်းများသို့ ရိက္ခာပို့ရန် ဒေသခံလူထု အား အဓမ္မ ခိုင်းစေခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို FBR ၏ အစီရင်ခံစာတွင် အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြပါရှိသည်။
တဆက်တည်းပင် KNU ၏ ဖားအံခရိုင်အတွင်း၌လည်း ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတွင် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်-ဘီဂျီအက်ဖ်က တိုးတက်ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-ဒီကေဘီအေ၏ လက်နက်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့နှစ်ဖွဲ့အ ကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား၍ ဒီကေဘီအေ ၂ဦး၊ ဘီဂျီအက်ဖ် ၅ဦး အပါအ၀င် ဒေသခံ ၁ဦးသေဆုံးကာ ဒေသခံ ၁ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟုလည်း FBR က ဆိုသည်။
၎င်းအပြင် FBR ၏ အစီရင်ခံစာ၌ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်း ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေအ တွင်း နေထိုင်သည့် ဒေသခံ ကရင်လူထုများသည် မြန်မာအစိုးရတပ်များ၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှု၊ သတ်ဖြတ် မှု၊ အဓမ္မခိုင်းစေမှုနှင့် မြေယာအသိမ်းခံရမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
“ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး ကာလဆိုပေမယ့် အစိုးရတပ်တွေ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ဆက်လက် ကျူးလွန်တာကို အထက်နဲ့ အောက် နားလည်မှု လွဲမှားတာပဲပြောပြော၊ အမိန့်မနာခံတာလို့ပဲပြောပြော ကျနော်တို့ကတော့ တကယ့်အဖြစ် အပျက်တွေကို တင်ပြစရာရှိတာ ဆက် တင်ပြသွားမယ်။”ဟု FBR မှ တာဝန်ရှိတဦးဖြစ်သူ စောကပေါ်စေးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားဒေသများဖြစ်သည့် ကရင်ပြည်နယ် အပါအ၀င် ကချင်နှင့် ကရင်နီ(ကယား)ပြည်နယ်များတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်များ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွင်း အစီရင်ခံစာ ၁၁စောင်ကို FBR မှ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
FBR အဖွဲ့ကို ၁၉၉၇ခုနှစ်၌ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ ကယန်း၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သျှမ်း၊ လားဟူ၊ နာဂနှင့် ပအိုဝ့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ (၁၁)ဖွဲ့ ရှိသည်။
လေးမြွှာပူးကလေးများကို မြိုင်ကြီးငူတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် အောင်မြင်စွာမွေးဖွား
Posted by မင်းစိုးစံ(အဝေးရောက် ကရင်ဒုက္ခသည်တဦး) at 11:27 AM0comments
အဆိုပါ လေးမြွှာပူးကလေးများကို လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ကော့စိန်ကျေးရွာနေ ဦးပြည်ထိုက် ၂၅ နှစ်၊ ဒေါ်ခင်ညွန့် ၃၄ နှစ်တို့ သဘာဝအတိုင်း ရိုးရိုးမွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမြွှာကလေးများမှာ ယောက်ျားလေးတစ်ဦးနှင့် မိန်းကလေးသုံးဦးတို့ ဖြစ်သည်။
''ကလေးတွေက ကီလိုချိန်အရမ်းသေးငယ်နေတဲ့အတွက် ဘားအံဆေးရုံကြီးကို ဆက်လက်ပေးပို့ စောင့်ရှောက်ထားတာပါ။ ဘားအံဆေးရုံကြီးမှာ အထောက်အကူပြု ဆေးကိရိယာတွေ ဒီမှာထက် ပိုမိုစုံလင်ပါတယ်။ လက်ရှိကလေးအခြေအနေ တစ်နေ့တခြား တိုးတက်လာပါ တယ်။ ကလေးလေးဦးစလုံး ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အရေး များပြားလာပါပြီ'' ဟု ကလေးများကို မွေးဖွားပေးခဲ့သူ မြိုင်ကြီးငူတိုက်နယ်ဆေးရုံ တာဝန်ခံ ဒေါက်တာစောစိုးမင်းက ပြောကြားပါသည်။ မြိုင်ကြီးငူ တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် မွေးဖွားခဲ့သော ပထမဦးဆုံးနှင့် ဒုတိယမွေးဖွားသော အမြွာကလေးမှာ မိန်းကလေးနှစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလေးချိန် ၁ ဒသမ ၃ ကီလိုနှင့် ၁ ဒသမ ၁ ကီလိုအလေးချိန်ရှိကာ တတိယမွေးဖွားသူမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး အလေးချိန် ၁ ဒသမ ၁ ကီလို၊ စတုတ္ထမွေးဖွားသူမှာ မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အလေးချိန် ၀ ဒသမ ၇ ကီလိုရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး တွင်KNU ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ကရင်များ ၀ိုင်းရံသွားမည်
ဆက်လက်၍ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် နိုင်ငံတကာ ကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ့အစည်းများ အပါအ၀င် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ကရင်အဖွဲ့အစည်း များ၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်လုံးရှိ ကရင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် KNU နယ်မြေ အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကရင်အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အပေါ် KNU အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာ ရှိကြောင်း သူမက ဖြည့်စွက် ပြောဆိုခဲ့ သည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတက်ရောက်လာသည့် ကရင်ကိုယ်စားလှယ်များက လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရ၏ အကျဉ်းချခံနေရသူ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် အပါ အ၀င် KNU အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကရင်လူထုများနှင့် အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်ပေးရန်လည်း မြန်မာအစိုးရအား တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ များ ပါဝင်မှု ရရှိရေး၊ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြစ်မချင်း ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်မှု မပြုရေးနှင့် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာအစိုးရ အပေါ် ဖိအားပေးအရေးယူမှု ဆက်လက်ထားရှိရေးတို့ကို ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ၎င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တဆက်တည်းတွင်ပင် KNU အနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ဖော်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ နှောင့်နှေးဆုံးရှုံး နစ်နာမှုမရှိစေရန် တိကျသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ပြသနိုင်စေရေးနှင့် အခြား အဓိကကျသည့် အချက်များကို ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ KNU နှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကရင်လူမှုရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသူများ အပါအ၀င် အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျား၊ ကိုးရီးယားနှင့် ဂျပန် စသည့်နိုင်ငံများမှ ကရင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် ကရင်လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Karen Peace Committee-KPC အဖွဲ့ဝင် အရှင်အဂ္ဂ၀ံသက “အခုလို စီမီနာကျင်းပခြင်းအားဖြင့် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားတွေ ရော၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ ကရင်အမျိုးသားတွေရော တစုတဝေး စည်းလုံးညီညွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကေအဲန်ယူရဲ့ ဆက် လက်လုပ်ဆောင်မဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်းပဲ စစ်မှန်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိ မယ်လို့ ခံယူပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ မြွက်ကြားပြောဆိုခဲ့သည်။
KNU သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး ပဏာမ သဘောတူညီမှု ရပြီးနောက် ၎င်းတို့ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေအချို့မှ ဒေသခံ များနှင့်တကြိမ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်တကြိမ်၊ ယခု ကရင်အမျိုးသားများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌တကြိမ် စုစုပေါင်း သုံးကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဦးထွန်းလွင်က၂၀၀၈ ခုနှစ်နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်း မိုး...
ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တည်ထားကိုးကွယ်မည့် စွယ်တော...
ပဒိုမန်း​ငြိမ်း​မောင်အမှုကို အင်္ဂါ​နေ့​မှာ စီရင်ချက်...
James Garwood | 1978 - 2010 (ကြွေလွင့်သွားပြီဖြစ်တ...
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့အြ...
ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ဘန်ကောက်၌ နိုင်ငံတကာ ကရင်အမ...
Umpiem Mai Refugee Camp Fire - destruction- coordi...
KNU ခရိုင်(၅)ခုမှ အစိုးရတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖော...
မြန်မာအစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး တွင်KNU ကို ပြ...